Home Wararka Shiikh Shaakir oo uga digay Qoor Qoor in uu ka baxo heshiiskii...
Shiikh Shaakir oo uga digay Qoor Qoor in uu ka baxo heshiiskii lala galay Ahlusunna
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaac ayaa ka hadlay dagaalladii lagu hooobtay ee ka dhacay Guriceel iyo sababta rasmiga ah ay uga baxeen gudaha magaaladaasi.
Sababta ay dib uga baxeen magaalada Guriceel waxa uu ku sheegay inay ku timid, kadib codsi ka yimid ganacsatada, bulshada rayidka ah, Senataro iyo siyaasiyiin reer Galmudug ah, ayna aqbaleen, iyaga oo u turayo dadka iyo deegaankaba , sida uu hadalka u dhigay.
Shiikh Shaakir ayaa uga digay Qoor Qoor in uu ka baxo heshiiskii lala galay Ahlu Sunna Wajameeca. Hadalka Shiikh Shaakir ayaa waxaa la muuqday kalsooni. Waxaan muuqata in Ahlu Sunna ay dagaal toos ah ku qaadi doonto Dhuusamareeb hadii Qoor Qoor isku dayo in uu ka baxo heshiiskii ay ka soo shaqeeyeen waxgaradka reer Galmudug.